Gehena muSero 2020: 7 zvinhu zvinoitika kekutanga - Wwe
Gehena muSero 2020: 7 zvinhu zvinoitika kekutanga
WWE Hell muSero rakagadzirirwa kuitika muzuva. WWE Superstars vakapinda dhimoni dhizaini vakagara vasiya chidimbu chavo mazviri. Svondo ino, makwikwi mazhinji achasarudzwa mugehena mumitambo yeCell.
#TheBigDog ari pano. #SmackDown @WWeromanReigns @HeymanHustle pic.twitter.com/HFA3ERQDbN
sei akabata ziso rangu
- WWE (@WWE) Gumiguru 24, 2020
Mitambo mitatu ichave iri pamutsetse pakubhadhara-pa-kuona. Tribal Chief Roman Reigns naJee Uso vanoenda kuhondo zvekare kuWWE Universal Championship.
Rimwe zita reblue rebhuruu iro richasarudzwa mugehena mumutambo weSero ndeye WWE SmackDown Women's Championship, apo Bayley anodzivirira Sasha Banks. Yezve RAW brand, Drew McIntyre achadzivirira iyo WWE Championship kurwisa Randy Orton kechitatu pane mubhadharo-wega-maonero.
Iine kadhi rakakiiwa rakadai rine mitambo inovimbisa, WWE Hero muSero inosungirwa kubudirira. Gehena regore rino muSero rinoratidzira chiitiko chakakosha kune mashoma WWE Superstars uye kuunzwa kweimwe isinganzwike mhando yemutambo.
# 7 Drew McIntyre anoita kutanga kwake mukati meGehena muSero
Drew McIntyre wekutanga-akambova Gehena MuMutambo weSero
kuudza musikana waunomuda usingakanganise hushamwari
Munguva yezuva, Drew McIntyre achange achipinda muGehena rake rekutanga mumutambo weSero. WeScottish Psychopath achange achidzivirira WWE Championship yake kuzorwa naRandy Orton, uyo achapinda muGehena rake rechisere mumutambo weSero.
Pachave pasina kwekutiza @RandyOrton Kutonga kwekutya paWWE #HIAC , uye ndiyo chaiyo nzira iyo WWE Champion @DMcIntyreWWE anochida.
McIntyre anga achimhanya chaizvo kubva paakakunda iyo WWE Championship kubva kuna Brock Lesnar kuWrestleMania 36 mukati memaminitsi mashanu. Scottish Psychopath yakarova vanopikisa vanotyisa saSeth Rollins, Bobby Lashley, Dolph Ziggler naRandy Orton.
Mutambo uri kuuya neSvondo unoratidza kusangana kwechitatu pakati peiyo Viper neiyo yazvino WWE Champion. McIntyre akawana zvirinani zveOrton pazviitiko zviviri zvakapfuura. Ruzivo rweViper mugehena mune fomati yeSero richava musiyano wekugadzira neSvondo?
mutengesi vsvanhu gehena muchitokisi
ane makore mangani musikana uya akarara akarara mu2020
kuda sei mukomana
nzvimbo dzekuenda kana iwe wakasuruvara